IXiaomi Smartwatch inokuba yinyani kungekudala | I-Androidsis
Ngaba iXiaomi isebenza kwi-smartwatch sayo kunye ne-Wear OS?
Kuyinyani ecacileyo ukuba ithebhulethi kunye nebluewatch bubble yagqabhuka kudala. Ngaphandle kokuqhakaza kokuqala kwezi zixhobo, kancinci kancinci ziye zachithwa zada zalibala. Kwimeko yeethebhulethi, njengoko iifowuni ezineescreen ezikhulayo zifikelela kwintengiso, ukubaluleka kwazo kuye kwabuzwa. Kwaye, kwimeko yeewotshi ezifanelekileyo, ukuzimela kwabo okuphantsi kunzima kakhulu kumava omsebenzisi. Nangona abanye Xiaomi smartwatch baziphatha kakuhle kakhulu malunga noku.
Kwaye, sesona sizathu siphambili sokuba usapho lweewotshi ezintle ezivela kwingxilimbela yaseAsia zitshayela emarikeni. Ungasathethi ke ngexabiso layo elingakholekiyo lemali, apho ungathenga khona izisombululo ezigqibeleleyo ngaphandle kokukrwela ipokotho yakho kakhulu.
I-Xiaomi smartwatch elandelayo iya kusebenza ne-Android WearOS
Kude kube ngoku, inkampani yaseAsia ibisele ikhethe eyayo inkqubo yokusebenza enokuthi ibenike ubomi kuyo yonke usapho lweXiaomi smartwatch. Kodwa, kubonakala ngathi isigebenga esise-Beijing sitshintshe ingqondo kwaye singasungula i-smartwatch entsha eza kusebenza kunye ne-ecosystem yezinto ezinxitywayo ezenziwe nguGoogle.
Ewe kunjalo, kuthathelwa ingqalelo ukuba ii-smartwatches zeXiaomi zithengisa kakuhle, kwaye ukuza kuthi ga ngoku abayisebenzisanga i-WearOS kuso nasiphi na isisombululo sabo, ingaba utshintsho lwenkqubo luyakwenza ntoni ngoku? Kusenokwenzeka ukuba sisivumelwano esitsha phakathi kukaGoogle kunye nefemu yaseTshayina.
Lumka, kudala sisiva amarhe malunga nokuba kunokwenzeka ukuba uGoogle asungule eyakhe iwatchwatch ixesha elide. Kwaye umbono wokuba le modeli yenziwe ngumenzi waseAsia ubonakala unomtsalane kuthi. Ewe, iXiaomi smartwatch, esayinwe nguGoogle, ngokuzimela okulungileyo kunye nexabiso lokunkqonkqoza, linokunika i-bang enkulu kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ngaba iXiaomi isebenza kwi-smartwatch sayo kunye ne-Wear OS?
I-Apple Music ibandakanya indlela emnyama kunye nokusasaza kweChromecast kwi-Android